Gabar lagala noqday dhalashada Ingriiska oo cunug yar ay dhashay ka saqiiray… – Hagaag.com
Warbaahinta caalamka ayaa baahineysa in Shamima Begum oo ah gabar British ah oo horay ugu biirtay kooxda ISIS ee Suuriya islamarkana iminka kasoo bad-baaday balse loo diiday in ay dib ugu laabato dalka Ingriiska ayaa waxaa ka dhintay cunugii yaraa 3 isbuuc jirka ahaa ee ay u dhashay dagaalyahan ISIS ka tirsan oo ka soo jeeda dalka Holland.
Cunugga ayaa u geeriyooday caabuq kaga dhacay dhanka dhuunta, sida uu xaqiijiyay qareenka reerka oo lagu magacaabo Tasnime Akunje. Geerida cunuga yar ayaa lagu wargeliyey aabihiisa oo ku jira xabsi ay maamulaan Kudiyiinta. Waana Cunugii seddaxaad ee ka dhinta.
Dhimashada Cunugan oo ahaa British oo dhashay inta aanan hooyada lagala noqon dhalashada ayaa caro ka dhaliyey gudaha Britain.
Shamima ayaa ka tagtay magaalada London sannadkii 2015kii si ay ugu biirto kooxda isku magacawda dowladda Islaamka, waxayna sheegtay in ay hadda doonayso in ay ku laabato UK balse dowladda dalkaasi ay u diiday.